Square ကိုဝါယာကြိုးကွက် - တရုတ် Hebei Samsung ကသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော Crimped ဝါယာကြိုးကွက်နှင့်ရင်ပြင်ဝါယာကြိုးကွက်အဖြစ်ယက်ဝါယာကြိုးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများမှာအများအပြားကပိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါရင်ပြင်ဝါယာကြိုးကွက်သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးစနစ်လည်းရည်ရွယ်ချက် sieving များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်ဖန်သားပြင်ပိတ်စဘေးထွက် Panel ကိုအတူသို့မဟုတ်မပါဘဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံစိစစ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြာအလုပ်အတွက်ဒဏ်ငွေဝါယာကြိုး-ကွက်မှထောက်ခံမှုပေးထားပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၏ပစ္စည်း: နွေဦးရာသီသံမဏိ (အဆင့်မြင့်နှင့်အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိ), အားလုံးအဆင့်နှင့်အခြားမည်သည့် desi အတွက်ရရှိနိုင်သံမဏိ၏ဖန်ဆင်း ...
Min.Order အရေအတွက်: 220 Roll / Rolls
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: နေ့နှုန်း 3000 စတုရန်းမီတာ / စတုရန်းမီတာ
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော Crimped ဝါယာကြိုးကွက်နှင့်အမျှယက်ဝါယာကြိုးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာ Square ကိုဝါယာကြိုးကွက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများမှာအများအပြားကိုပို။
The Square ကိုဝါယာကြိုးကွက် or Supporting System is also used for sieving purpose. This Screen Cloth is manufactured with or without Side Panel and sometimes provide support to fine wire-mesh in screening and separation work.
နွေဦးရာသီသံမဏိ (အဆင့်မြင့်နှင့်အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိ), အားလုံးအဆင့်နှင့်အခြားမည်သည့်ဆန္ဒရှိသတ္တုအတွက်ရရှိနိုင်သံမဏိ၏ဖန်ဆင်း။
100 မီလီမီတာမှ 12 မီလီမီတာ၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်။ သူတို့က 2.5 မီလီမီတာကနေ 8 မီလီမီတာအထိတစ်ဝါယာကြိုးအချင်းတယ်ပါပြီ။
သူတို့ကအောက်ပါအတွက်မြင့်မားတဲ့ application ကိုရတယ်:
• Iron Ore သံသတ္ထုနှင့်သံမဏိစက်မှုလက်မှု
ယခင်: Crimped ဝါယာကြိုးကွက်
Square ကိုဝါယာကြိုး Panel ကို 4x4